Thenga i-Bitcoin nge E-Algeria ngoko nangoko nangokuKhuselekileyo | Paxful
Thenga i-Bitcoin ngoko nangoko ku E-Algeria
Urhwebo lwe-Bitcoin lomhlobo kumhlobo olunkqenkqeza phambili emhlabeni ngoku luse-Algeria, nto leyo eyenza kube lula ngawe ukutshintsha i-Dinar yakho yaseAlgeria (DZD) iye kwi-BTC.
I-Paxful yindlela ekhawulezayo nengabizi kangako yokuthenga i-Bitcoin engenamirhumo neneendlela zokubhatala ezingaphezu kwe-300 onokukhetha kuzo. Ikwayenye yeendawo ezikhuselekileyo onokurhweba kuzo, inokhuseleko olukwizinga le-vault kunye nogunyaziso lwenyathelo lesibini ukuze kukhuselwe iakhawunti yakho.
Ngoko unqandwa yintoni? Thenga i-Bitcoin yakho yokuqala ngoku kwidesktophu okanye nge-app yakwa-Paxful ye-iOS neye-Android!
Amaxabiso aphambili e I-Dinar yaseAlgeria kwi E-Algeria
Ubonwe 13 ingqalelo ago I-PayPal — Genuine trade partner
2 061.00-12 827.00 DZD 2 061.00 DZD $0.83 Thenga 7 042 292.58 DZD Thenga Thenga
Kwi-intanethi I-Western Union — Instant release
13 550.00-22 000.00 DZD 13 550.00 DZD $0.87 Thenga 6 748 863.72 DZD Thenga Thenga
Iindlela zokubhatala eziphambili kwi E-Algeria
Nceda abanye abantu base E-Algeria bafumane i-Bitcoin uze ufumane iingeniso EZINKULU ezifikelela kwi 60% kwintengiso nganye. Qalisa ukuthengisa ngeakhawunti yakho yebhanki yasekuhlaleni ngoku, jonga isikhokelo sethu sasimahla. U-Paxful ufumana abathengi be-Bitcoin abangama-1000 base E-Algeria mihla le.
Unabantu abaninzi obaziyo abafuna ukuthenga i-Bitcoin e E-Algeria? Nge Kiyoski yakho ye-Bitcoin nenkqubo yeHlakani ufumana umvuzo we-2% kurhwebo ngalunye ngonaphakade ngokwabelana nje ngelinki. Qalisa ngoku.